Imirikitindịbịagịna ebenrụọrụweebụanaghịagaịghọndịna-eguzosi ike n’ihe。 Eleghịanya hana-achọpụtaọtụtụ，ọbụnaọtụtụnarịweebụsaịtịna nke a，ọdwakwamwute naọdịmfeịchefunkegịmgbe hagụsịrịya-ọgwụlamaịna-es.
we na na na na na na na na weịwe weịị Ma mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ojiji ya，manaọbụrụnaịna-ewulindịna-egegịntịna-eguzosi ike n’ihe ma na-echekwa博客gị，ọpụghịịkatọ电子邮件.
通过电子邮件发送给ịbịnkànaụzụoge ochietụnyeremgbasa oziọhammadụ，manaọka mmakarịanaịnatara ozigị。 N’elu mgbasa ozi mgbasa ozi，ozidịiche ichena-akụkarịkwaụda。 N’aka nkeọzọ，发送电子邮件给na-anọn’ime igbe mbata nkendịna-egegịntị，ọgaghịapụkwamaọbụrụna eleghara ya anya.
Na site na email，ịgaghịenwe ihe gbasara njide agwa，oyiyinkọwa，ụgwọruru，maọbụokwumkparị.
listbụya mere ego jidịna listiahụ。 Nke abụotu esi nwetandepụtagịna-arụọrụmakagị.
1 Kedu esi esimepụtalisti emailgị?
Kedu esi esimepụtalisti emailgị?
N’zọdoro anya，iji mee egoọbụlasite na emailgịautoresponder，ịga-ebuụzọnwetandịdebanyere aha.
Manaọbụghịnaanịndịdebanyere ahaọbụla-naanịchọrọndịdebanyere ahandịnmeremmasịna iheịnwere inye。 ịdịmkpailekwasịanyamgbalịgịnaịmepụtalistiàgwàndịna-agụnyendịna-egegịntị.
emailbụrụnaịchọtandịdebanyere aha电子邮件bụihe mgbaruọsọbụisi nke博客gị，ịkwesịrịime kaọbụrụna ebenrụọrụweebụgịdịna ya。 Ụdịnhọrọg- ga-esi naọdịnayagịpụta。 Ọbụrụna ebenrụọrụweebụgịjupụtara，ọdịghịonyega-ahụụdịnhọrọgị。 Kọwaaihendọpụuchena-enweghịisi ma jide n’aka naụdịntinyegịdịanya.
Chee echiche iji otu onyena-enweghịiwe，enyi-enyina-emepụtaụdịiji nwetaọbụnandzọzọndịdebanyere aha。 N’ebe a WHSR，任何ịna-eji Ninja Popups。现在，您可以在CodeCanyon中找到Ninja Popups。 ị–Opti n，WordPress WordPress Opti Opti Opti Opti Opti Opti Opti Opti Opti Opti Opti Opti.
Usoro a na-ewu ewu iji nwetandịọzọdebanyere aha emailbụsite n’inye ya freebie，dịkaakwụkwọe-akwụkwọmaọbụozi email，nyendịdebanyere ahaọhụrụ.
Uzo ozo edeputara nke oma nke na-ewu ewu na nso nbu ahe idi ozo di mma，ebe ndi na-edeblọgụna-enye ndi mmadu na-enye onwe ha ohere iji kwado（"恩韦塔·恩克拉特"）.
Mgbeịna-enye赠品chọrọego ihu oge n’ihu，ọtụtụndịna-edeblọgụna-achọpụtanaọna-enyere akaịgbakwụnyemmelite电子邮件ha.
Otúọdị，jide n’aka naịga-eburu n’uche naịchọghịkandịọzọdebanyere aha-ịkwesiri 恩里 ndịdebanyere aha.
Nwepu egogịkwesịrịịbụkpọmkwemihendịeletaanyagịchọrọibudata。 Ọbụrụna nnwere onwegịna-adọtandịna-egeghịntị，ga-eme kaọnụọgụgụdịelu nkeịdebanyeahagị。 T freelee ijindịna-agụakwụkwọna-enyochaịchọtakpọmkwemihe赠品na-adọrọmmasịmakandịna-egegịntịpụrụiche.
Pat Flynn nke Smart Passive Income的网站上显示了自己的站点，而Bluehost和LeadPages.
Iji Chebaa电子邮件gị自动回复器，ịga-achọihe ga ga-ere.
Njikọnjikọtabụzọa na-ewu ewu iji jiri egona-emepụtandịna-emepụta电子邮件。 we we Na Na Na Na Na Na Na Na NaọọọọọọNa Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na.
我在nwekwara ike inweta自我网站n’inwetangwaahịanaọrụgị。 Ngwaahịadịicheiche，d，kaọmụmụna ebook，bụzọnkịtịiji nweta egona-enweghịego。 gebụezie na hach​​ọrọoge iji nweta ego ijimepụtangwaahịaahụ，ha nwere ikeịnọgidena-enweta egoịna-enweta ngwa ngwa maọbụrụnagịonwegịzuru ezu，n’enweghị ị.
Ntinyeakwụkwọ4 iji tinye listi nzipu ozi nandịahịa
Ọbụghịoziọbụlakaịga-ereahịasiri ike，maọbụna ga ga-enweọtụtụnzapu.
Otúọdị，ga-ahapụụzọmeghere makaahịana emailọbụla。 ịbụnaoziịntanetịgịnwere ikeijikọtanasaịtịgị，ebendịbịanwere ikeịchọtanjikọịzụtangwaahịagịmaọbụpịanjikọnjikọgị.
Na oziịmalitegị，ga-ewulitentụkwasịobi nandịna-egegịntị。 Ọbụrụnaịna-amalite mandepụtagịkadịobere，atụlaụjọịkpọndịdebanyere ahaịzaghachinakpọtụrụgịozugbo.
Maka ihekachasịego，nyeọtụtụngwaahịanaọrụnaọnụahịaihedịiche iche na usorogịniile。 Naanịn’ihi na电子邮件，价格$ 500adịghịarụụrụ，nkeahụapụtaghịnaịga-adambànandịahụdebanyere aha。 $ 50美元起.
N’etitindịbịandịzọ电子邮件ahịangwáọrụ，Nọgidena-emechibụahana-abịamgbe niile（ọdịghịiwuọbụla）。 Ewezụgaọrụyan’ahịaahịa，saịtịahụagbasawokwa iji tinyeọrụndịmetụtaraahịaahịandịọzọ。 Lelee NlelekọntaktịTim si na mgbe niilechọpụtaihe.
GetResponsebụngwáọrụahịaahịaanyịa akwadoro na nnukwuelekwasịanya nandịna-emepụtaihe。 Haanọwogburugburukarịaafọ15.Anyịna-ejiyaịmepụta，zipụ，ma soroakwụkwọakụkọemail nandịdebanyere ahaanyịnanọahịadịnọ。 LeleeNtụleghachinke Jerry GetResponsechọpụtaihe.
AWeberbụihe na-ewu ewu na listi电子邮件nkena-agụnyenjirimarana-arụụrụ。 Ha na-enyekwangwáọrụ电子邮件na-email kandịna-debanyere ahagịnwere ikeịnwetaozintanetịọhụrụgị，na-eme kaakwụkwọakụkọgịkpamkpam.
MailChimpbụakwụkwọozi电子邮件na-ewu ewubụndịa ma ama makaịdịmfe nke ojiji na ezigbo ndebiri（ọbụghịịkọabụmara mma ha mascot）。 MailChimp na-enyengwáọrụna-arụọrụnaakaụntụhaakwụụgwọnaanị。网站na ngwangwaọrụha，nikeikemepụtaọtụtụoziịntanetịmakandịdebanyere ahaọhụrụ，maọbụụbụnatinye oziịntanetịka a zitere mgbe iheụfọdụmepụazipzip.
gobụrụnaịchọrọịdeblọgụego，dokémkpa iji wuo listi电子邮件.
Oziọmaahụbụ，ọdịtụbeghịoge！ Bido网站na banban maka ntinyeakwụkwọnhọrọ电子邮件gị，na debeụfọdụnwepu aha na ebenrụọrụweebụgị。 Ozugbo i nwere echiche nke ihendịna-egegịntịchọrọ，ịnwereikeịmepụtangwaahịahaga-ahụn’anya.
Ọbụezie nandịna-emepụtaegona-ewepụtaegona-ewepụtaoge iji guzobe，ozugbo hanọn’ọnọdụ，ha nwereikeịbịezigbo ego na-enweta ego makandịna-edeblọgụnaz.